मधुमेह हुन नदिन र भएपछि कस्तो खानपान गर्ने ?
साधारणतया हामीले खाएको खाना शरीरभित्र विभिन्न प्रक्रियाबाट चिनी अर्थात् ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ । प्याङ्क्रियाजबाट निस्कने इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई कोषहरुमा पुर्‍याउँछ र शक्तिमा परिणत भई शरीरका विभिन्न कार्य सञ्चालनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । इन्सुलिन आवश्यक मात्रामा उत्पादन नहुँदा या प्राप्त इन्सुलिनको उपयोग राम्ररी नहुँदा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्ने अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ।
प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन बनाउन नसकेको अवस्थामा शुरुबाटै इन्सुलिन लिनुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारको मधुमेह विशेषगरी बालबालिकामा हुन्छ।
बनेको इन्सुलिन शरीरले उपयोग गर्न नसक्दा पनि मधुमेह हुन्छ । साधारणतया ३० वर्ष नाघेका वयस्क व्यक्तिमा यस्तो हुने भए पनि परिवर्तित 18, अस्वस्थकर खाना, शारीरिक रुपले निस्क्रिय, मद्यपान, मानसिक तनाव लगायतका कारणले कम उमेरका व्यक्तिमा मधुमेहको समस्या देखिने गरेको पाइन्छ।
४. निस्क्रिय 18 एवं शारीरिक व्यायाममा कमी भएमा,
नियमित स्वास्थ्य जाँचले मधुमेहका कारण हुन सक्ने अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मधुमेह भएकाले खाली पेटमा र खाना खाएको २ घन्टापछि रगतको जाँच गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष रगतको लिपिड 19, मिर्गौला, कलेजो, थाइराइड, आँखा तथा मुटुको जाँच गर्नुपर्छ । साथै, पिसाबको रुटिन जाँच पनि गर्नुपर्छ ।
खानामा कार्बोहाइड्रेटको बढी प्रयोग, विलासी हुँदै गएको 18, कम शारीरिक श्रम गर्ने प्रवृत्तिबाट निम्तिएको मोटापना लगायतका कारण आजकाल मधुमेहको जोखिम बढ्दै गएको हो । मधुमेह नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि नियमित व्यायाम, औषधि सेवन, इन्सुलिनको प्रयोगका साथै खानपान नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । खानपान व्यवस्थापनका लागि निम्न कार्य गर्न सकिन्छः